Waa maxay cibaadadu? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Cibaadadu waa jawaabta rabbaaniga ah ee ammaanta Ilaah. Waxa lagu kiciyaa jacaylka rabaani ah waxayna ka soo baxdaa is-muujinta rabbaani ah ee abuuristiisa. Cibaadada, rumaystahu wuxuu galayaa wada xiriirka lala yeesho Ilaaha Aabbaha ah xagga Ciise Masiix, oo lagu dhex dhexaadiyo Ruuxa Quduuska ah. Cibaadadu waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad siiso is-hoosaysiin iyo farxad farxad leh Ilaah wax kasta. Waxay isu muujisaa dabeecadaha iyo ficillada sida: salaadda, ammaanta, dabaaldegga, deeqsinimada, naxariista firfircoon, toobadda (Yooxanaa 4,23; 1 Yooxanaa 4,19; Filiboy 2,5-11; 1 Butros 2,9-10; Efesos 5,18-20; Kolosay 3,16-17; Rooma 5,8-11; 12,1; Cibraaniyada 12,28; 13,15-16).
Ilaah waa mudan yahay maamuus iyo amaan
Ereyga Ingiriisiga "cibaadada" ayaa tilmaamaya in qofku uu tixraaco qiimaha iyo xushmadda qofka. Waxaa jira ereyo badan oo Cibraani ah iyo kuwo Griig ah oo lagu tarjumay cibaadada, laakiin kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah fikirka aasaasiga ah ee adeegga iyo waajibaadka, sida addoonka uu sayidkiisa u muujiyo. Waxay muujinayaan fikradda ah in Ilaah kaligiis yahay Sayidkasta oo nolosheenna ka mid ah, sida lagu muujiyey jawaabta Masiixa ee Shaydaanka ee Matayos 4,10: 'Iska fogee, Shayddaanow! Waayo, waxaa qoran, Waa inaad caabuddo Rabbiga Ilaahaaga ah oo waa inaad isaga u adeegtaa oo keliya (Matayos 4,10; Luukos 4,8; Sharciga Kunoqo 5).
Fikradaha kale waxaa ka mid ah allabari, qaansada, qirashada, cibaadada, cibaadada, iwm. "Nuxurka cibaadada ilaahnimadu waa bixinta - iyadoo la siinayo Ilaah waxa isaga ku saleysan" (Barackman 1981: 417).
Masiixu wuxuu yidhi “waxaa la gaadhay saacaddii ay caabudayaasha runta ihi ay Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta; maxaa yeelay aabuhu sidoo kale wuxuu rabaa inuu lahaado cibaadada noocan ah. Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta " (Yooxanaa 4,23-24).
Masaafada kor ku xusan waxay soo jeedineysaa in cibaadadu ay ku wajahan tahay aabaha iyo in ay tahay qeyb muhiim ka ah nolosha qofka muuminka ah. Sida Ilaah uu yahay ruuxa, cibaadadayadu kaliya maahan doonto jir, waxay sidoo kale buuxin doontaa jiritaankeenna oo dhan oo waxay ku salaysnaan doontaa runta (Ogsoonow in Ciise, Ereyga, uu run yahay - eeg Yooxanaa 1,1.14; 14,6; 17,17).
Nolosha oo dhan ee iimaanka waa cibaadada iyada oo laga jawaabayo ficillada Ilaah iyada oo "ku jeclaata Rabbiga Ilaaheenna ah oo ku jirta qalbigeenna oo dhan, iyo nafta oo dhan oo caqligeenna oo dhan iyo xooggayaga oo dhan la jirta" (Mark 12,30). Cibaadada runta ahi waxay ka tarjumaysaa qoto dheerida ereyada Maryan: "Naftaydu Rabbigay ku ammaantaa" (Luukos 1,46).
Cibaadadu waa nolosha oo dhan ee Kaniisadda oo ay bulshada masiixiyiinta ahi rumaysato xoogga Ruuxa Quduuska ah, oo ay ku helayaan Ilaaha ah Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix. (ha ahaato) (Jinkins 2001: 229).
Wax kasta oo Masiixi ah sameeyo wuxuu fursad u yahay cibaadada mahadnaqa. "Oo wax kastoo aad ku samayso hadal ama shuqullo, wax walba waxay ku samaysaa magaca Rabbi Ciise iyo waxaad ku ammaaneysaa Ilaaha Aabbaha ah oo isaga xaggiisa ku jira" (Kolosay 3,17:1; sidoo kale eeg 10,31 Korintos).
Ciise Masiix iyo cibaadada
Qaybta kore waxay sheegaysaa inaan ku mahadnaqno xagga Ciise Masiix. Tan iyo markii Ciise, Sayidku yahay, kan "Ruuxa" (2 Korintos 3,17), oo ah dhexdhexaadiyeheenna iyo u doodidda, cibaadadayadu waxay ku socotaa isaga xagga Aabbaha.
Cibaadadu uma baahna dhexdhexaadiye aadanaha, sida wadaaddada, maxaa yeelay aadanaha ayaa Ilaah lagala heshiiyay dhimashadii Masiixa iyo isaga oo leh “wuxuu ku heli karaa Aabbaha ruux keliya” (Efesos 2,14: 18). Waxbariddani waa qoraalka asalka ah ee aragtida Martin Luther ee "wadaadnimada rumaystayaasha oo dhan". «... kaniisadda waxay Ilaah ku caabudaysaa ilaa iyo inta ay ku jirto cibaadada kaamilka ah (leiturgia) ee uu Masiixu Eebbe ina siiyay.
Ciise Masiix waxaa lagu caabudi jiray dhacdooyin muhiim ah noloshiisa. Mid ka mid dhacdadan oo kale ayaa ahayd dabaaldega dhalashadiisa (Matayos 2,11) markay Malaa'igta iyo adhijirraduba reyreeyeen (Luukos 2,13: 14-20,), iyo sarakiciddiisa (Matayos 28,9, 17; Luukos 24,52). Xitaa inta lagu gudajiray wasaaradiisa dhulka, dadku waxay caabudeen isaga oo ka jawaabaya shaqadiisa iyaga (Matayos 8,2; 9,18; 14,33; Mark 5,6, iwm). Muujintii 5,20 waxay ku dhawaaqeysaa iyadoo la tixraacayo Masiixa: "Wankii la gowracay waa istaahilaa."
Wadajirka wadajirka ee Axdiga Hore
Carruurta carruurtu waxay ammaani doonaan shuqulladaada, Oo waxay sheegi doonaan falimahaaga waaweyn. Waxay ka hadli doonaan sharaftaada, Iyo shuqulladaada yaabka badan. Waxay ka hadli doonaan shuqulladaada xoogga badan, Oo sharaftaadana waxay ka sheegi doonaan, Waa inay ku ammaanaan wanaaggaaga weyn oo ay ammaanaan caddaaladdaada (Sabuurradii 145,4: 7).
Dhaqanka ammaanta wadajirka iyo cibaadada ayaa si adag salka ku haysa dhaqanka kitaabiga ah.
In kasta oo ay jiraan tusaalooyin bixinno shaqsiyadeed iyo caabudid, iyo sidoo kale nashaadyo jaahili ah, ma jirin qaab cad oo loo wada dhan yahay oo caabudaadda Ilaaha runta ah ka hor intaan Israa'iil loo aasaasin qaran ahaan. Codsiga Muuse ee Fircoon oo ahaa inuu u oggolaado reer binu Israa'iil inay u dabaaldegaan iidda Rabbiga waa mid ka mid ah astaamaha ugu horreeya ee yeedhitaanka cibaadada wadajirka ah. (Bilowgii 2:5,1).
Markay ku sii jeedeen dhulkii loo ballanqaaday, Muuse wuxuu qoray ciidaha qaarkood oo ay tahay in reer binu Israa'iilku jidh ahaan u dabbaaldegaan. Kuwani waxaa lagu sheegay Baxniintii 2, Laawiyiintii 23 iyo meelo kale. Marka laga hadlayo macnaha, waxay dib ugu laabtaan xuska guuritaankii Masar iyo waaya-aragnimadooda ay cidlada ku soo mareen. Tusaale ahaan, Iiddii Waababka waa la dhigay si farcanka reer binu Israa'iil ay u ogaadaan "sida Ilaah uga dhigay reer binu Israa'iil hoyga dhexdiisa" markuu iyaga ka soo kaxeeyey dalka Masar. (Bilowgii 3:23,43).
In la daawado shirarkan xurmada leh ee reer binu Israa'iil ayan ahayn kalandarka taarikhiga ah ee xirmay waxay ka caddaatay xaqiiqooyinka Qorniinka in laba maalmood oo dheeri ah oo sanadle ah oo xorriyadda qaran lagu daray dambe ee taariikhda Israa'iil. Mid ka mid ah wuxuu ahaa Funaantii Fim, oo ahayd wakhti “farxad iyo rayrayn, diyaafad iyo maalin diyaafad ah” (Esteer [bannaan]] 8,17; Yooxanaa 5,1 sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu tixraaco Bandhiga Bandhiga). Ta kalena waxay ahayd iiddii macbudka. Waxay qaadatay sideed maalmood waxayna bilaabatay 25-ka Kislew sida ku xusan jadwalka taariikhda Cibraaniga (Diseembar), iyo soo bandhigidda iftiinka ayaa u dabaaldegay nadiifinta macbudka iyo guushii ay ka soo hooyeen Antiochus Epiphanes oo uu soo saaray Mac Macabeabe sanadku markuu ahaa 164 BC. Ciise qudhiisa, “iftiinka dunida”, wuxuu joogi jiray macbudka maalintaas (Yooxanaa 1,9; 9,5; 10,22-23).
Maalmo soonka oo kala duwan ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay waqtiyo cayiman (Sekariah 8,19), iyo bilaha cusub ayaa la arkay (Esra [space]] 3,5, iwm). Waxaa jiray maalin kasta iyo toddobaadle xukunno guud, cibaado, iyo allabaryo. Sabtiga usbuuclaha ah wuxuu ahaa amar "urur quduus ah" (Laawiyiintii 3: 23,3) iyo calaamadda axdigii hore (Baxniintii 2: 31,12-18) oo u dhexeeya Ilaah iyo reer binu Israa'iil, iyo sidoo kale hadiyad ka timid Ilaah nasashada iyo adeegsiga (Bilowgii 2: 16,29-30). Iyadoo ay weheliso maalmaha ciida ah ee reer Laawi, sabtida waxaa loo tixgeliyay inay ka mid yihiin axdigii hore (Bilowgii 2: 34,10-28).
Macbudku wuxuu ahaa qodob kale oo muhiim ah horumarinta qaababka cibaadada ee Axdiga Hore. Iyada oo macbudkeedu leeyahay, Yeruusaalem waxay noqotay meesha udub dhexaadka u ah rumaystayaasha u safray inay dabaaldegaan ciidaha kala duwan. Waxaan rabaa inaan ka fikiro taas oo qalbigayga ku daadiyo: sida aan ugu guuray tiro aad u badan si aan iyaga ula fuulo iyaga oo leh guriga Ilaah anigoo faraxsan
waana uga mahadcelinayaa dadkii badnaa ee halkaas ka dabaaldegayay » (Sabuurradii 42,4; eeg sidoo kale 1Chr 23,27-32; 2Chr 8,12-13; Yooxanaa 12,12; Falimaha Rasuullada 2,5-11, iwm).
Kaqeybgal buuxa oo cibaado dadweyne ayaa lagu xaddiday Axdigii Hore. Degmada gudaheeda dhexdeeda, haweenka iyo carruurta ayaa badanaa loo diiday inay galaan meesha ugu weyn ee lagu caabudo. Dhalashooyinka sharci darrada ah iyo sharci darrada iyo sidoo kale qowmiyado kala duwan sida reer Moo'aab waa inaysan “waligood" shirka gelin (Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 23,1-8). Waa wax xiiso leh in la falanqeeyo fikradda Cibraaniga ah ee "waligaa". Dhinaca hooyadiis, Ciise wuxuu ka yimid naag reer Moo'aab ah oo la odhan jiray Ruth (Luukos 3,32; Matayos 1,5).
Wadajirka wadajirka ee Axdiga Cusub
Waxa jira farqi cad oo u dhexeeya Axdiyada Hore iyo Axdiga Cusub ee ku saabsan quduusnaanta xagga cibaadada. Sidii horeba loo sheegay, Axdigii Hore meelo cayiman, waqtiyo, iyo dadkuba waxaa loo qaddarin jiray inay yihiin muqadas sidaa darteedna ay aad ugu habboon yihiin dhaqanka cibaadada kuwa kale.
Axdiga cusub waxaan ka soo marnay Axdi Axdi Hore ah oo loo dhan yahay Axdiga Cusub oo loo dhan yahay aragtida quduusnimada iyo cibaadada; meelaha qaarkood iyo dadka meelaha oo dhan, waqtiyada iyo dadka.
Tusaale ahaan, taambuugga iyo macbudka ku yaal Yeruusaalem waxay ahaayeen meelo quduus ah "meeshii lagu caabudo" (Yooxanaa 4,20), kaas oo Bawlos ku amrayo in raggu aysan gacmo quduus ah kor u qaadin oo keliya ma aha oo loo cayimay Axdigii Hore ama meelaha lagu cibaadeysto ee Yuhuudda, laakiin "meel walba," dhaqan la xiriira macbudka macbudka (1 Timoteyos 2,8: 134,2; Sabuurradii).
Axdiga Cusubi, isu imaatinka bulshada ayaa lagu qabtaa guryaha, qolalka dabaqyada sare ah, wabiyada webiyada, wabiyada harooyinka, buur dusheeda, iskuulada, iwm. (Mark 16,20). Rumaystayaashu waxay noqdaan macbudka uu ku dhex yaallo Ruuxa Quduuska ahi (1 Korintos 3,15: 17) oo waxay ku kulmaan meel kasta oo Ruuxa Quduuska ahi u horseedayo shirarka.
Ilaa maalmaha ciidaha qadiimka ah ee Axdiga Hore, sida "fasax gaar ah, bil cusub ama maalin sabti", kuwani waxay matalaan "hooska mustaqbalka", xaqiiqada taas oo ah Masiixa (Kolosay 2,16: 17) Sidaa darteed, fikradda wakhtiyada cibaadada qaaska looma adeegsado buuxinta Masiixa awgood.
Xoriyad ayaa ka jirta doorashada waqtiyada cibaadada iyadoo loo eegayo shaqsiyaadka, bulshada iyo duruufaha dhaqan. Mid ayaa u maleeya in maalin ka sarreysa kan kale; kan kale, hase yeeshe, si isku mid ah ayuu u tixgeliyaa maalin kasta. Qof walba waa ku hubsan yahay fekerkiisa » (Rooma 14,5). Axdiga Cusubi, shirarku waxay dhacaan waqtiyo kala duwan. Midnimada kaniisadda waxaa lagu muujiyey nolosha rumaystayaasha ee Ciise isagoo ku maraya Ruuxa Quduuska ah, ee aan lagu soo marin caadooyinka iyo kalandarrada sheeko diineed.
Marka laga hadlayo dadka, dadka reer binu Israa'iil oo keliya ayaa matalay dadka quduusiinta ah ee Axdiga Hore dhexdiisa Axdiga Cusubi, dadka oo dhan meel kasta waxaa lagu casuumay inay ka mid noqdaan dadka Ilaah ee ruuxiga ah, iyo dadka quduuska ah. (1 Butros 2,9: 10).
Waxaan ka baranay Axdiga Cusub inuusan jirin meel kafiican dhammaantiis, waqti aan ka kafiirneyn kuwa kale, oo aysan jirin cid ka daacad ah wax walba. Waxaan baranay in Eebbe "uusan qofka fiirin" (Falimaha Rasuullada 10,34: 35) sidoo kale ma fiiriyaan waqtiyada iyo meelaha.
Axdiga Cusub dhexdiisa, dhaqanka isu-imaatinku si firfircoon ayuu u dhiirrigelinayaa (Cibraaniyada 10,25).
Wax badan ayaa lagu qoray waraaqaha rasuullada waxa ku saabsan waxa ka dhex dhaca kaniisadaha. Ha u dhacdo in wax walba la dhiso. " (1 Korintos 14,26) Bawlos wuxuu intaas ku daray oo raaciyay: «Laakiin wax waluba ha noqdaan kuwo daacad ah oo nidaamsan» (1 Korintos 14,40).
Tilmaamaha ugu weyn ee cibaadada wadajirka ahi waxay ahayd wacdinta erayga (Falimaha Rasuullada 20,7; 2 Timoteyos 4,2), ammaan iyo mahadnaq (Kolosay 3,16: 2; 5,18 Tesaloniika), duco u ah injiilka iyo midba midka kale (Kolosay 4,2: 4-5,16; Yacquub), wadaaga farriimaha ku saabsan shaqada injiilka (Falimaha Rasuullada 14,27) iyo hadiyado loogu talagalay kuwa u baahan kaniisadda (1 Korintos 16,1: 2-4,15; Filiboy 17).
Munaasabadaha gaarka ah ee cibaadada ayaa sidoo kale ka mid ahaa xusuusta allabarigii Masiixa. Wax yar ka hor dhimashadiisa, Ciise wuxuu bilaabay cashada Rabbiga isagoo gebi ahaanba beddelaya marinka Axdiga Hore. Halkii uu u isticmaali lahaa fikirka muuqda ee wanku inuu u tilmaamo jirkiisii ​​inagu jabsaday, wuxuu doortay rooti na jebisay.
Wuxuu kaloo keenay sumadda khamriga, taasoo astaan ​​u ah dhiigiisa uu daadshay, kaas oo aan ka mid ahayn waxyaabaha gudbiyaha ah. Wuxuu ku beddelay Baasaboorkii Axdiga Hore qaab dhaqan ah oo lagu xusayo Axdiga Cusub. Markasta oo aan kibistan cunno oo aannu khamri cabno, waxaan sheegnaa dhimashada Rabbiga ilaa uu soo noqdo (Matayos 26,26: 28-1; 11,26 ​​Korintos).
Cibaadadu kuma eka oo keliya ereyada iyo falalka amaanta iyo u-go'naanta Ilaah. Waxay kaloo ku saabsan tahay aragtideena dadka kale. Sidaa darteed, ka qayb-qaadashada adeeg aan lahayn ruux dib-u-heshiisiin waa mid aan habboonayn (Matayos 5,23: 24).
Cibaadadu waa jir, maskax, shucuur, iyo ruuxiyan. Waxay ku lug leedahay nolosheena oo dhan. Waxaan nafteena u bixinnaa "sidii allabari nool, oo quduus ah oo Ilaah ka farxiya", taas oo ah cibaadadayada caqliga leh (Rooma 12,1).
Cibaadadu waa caddayn sharaftii iyo karaamadii Eebbe, ee lagu muujiyey nolosha rumaystaha iyo ka qaybgalkiisa bulshada rumaystayaasha.